Chassis Switch Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Chassis Switch Factory
DCRS-9800 Taxanaha Cloud Stone Core Lakabka Wareejinta
DCN DCRS-9816 waa waxqabadka sare ee xawaaraha siligga gawaarida gawaarida gawaarida. DCRS-9816 waxay leedahay 18 boos, oo ay kujiraan 2 boosas maamul iyo 16 boosas ganacsi. Iyada oo leh koronto la'aan, taageerayaal iyo qaabab maareyn, DCRS-9816 waxay hubisaa hawlgal joogto ah iyo nidaam buuxa. Taxanaha 'DCRS-9800' wuxuu u adeegaa shuruudaha isku xirka kambaska iyo xarunta xogta ee ganacsiga, ganacsiga, iyo bay'ada bixiyaha adeegga. Waxyaabaha Wax soo Saarka Waxqabadka iyo Isbeelitirka DCRS-9816 waxay taageertaa ilaa ugu badnaan 320 * 10G port ama ...
DCRS-7600E Series waa DCN's waxqabadka sare ee gawaarida gawaarida, oo ka kooban laba nooc. 1 DCRS-7604E waa 4 boosas Chassis Switch. Waxay taageertaa dekedaha Ethernet ee hareeraha maareynta, taas oo hubineysa muuqaalka ugu badan ee cufnaanta sare 2 DCRS-7608E waxay leedahay 10 boosas. Waxay leedahay 2 boosas maamul iyo 8 boosas ganacsi. Isticmaaluhu wuxuu ku habeyn karaa hareeraha ganacsiga shuruudo cayiman. Iyada oo koronto aan xad lahayn, taageerayaal iyo qaabab maareyn ah, DCN DCRS-7600E Series ay hubineyso hawlgal joogto ah oo si buuxda aan loo baahnayn ...
CS16800 Taxanaha Cloud Stone Muhiimka Wareejinta Wareejinta
DCN CS16809 waa furaha gawaarida gawaarida loo yaqaan 'chassis biiro' oo loogu talagalay inuu buuxiyo shuruudaha shabakad muhiim u ah howlaha oo leh waxqabad sare, helitaan aan caadi aheyn iyo isugeyn heer sare ah. CS16809 waxay u adeegtaa shuruudaha isku xirka xarunta iyo xogta xarunta, waxay taageertaa geynta siyaasad isku xirnaan dabacsan, waxayna dhistaa shabakad ganacsi oo qeexan oo loogu talagalay dadka isticmaala Astaamaha iyo Muhiimka CLOS Dhisme aan xirneyn CS16809 waxay fidisaa CLOS-da badan ee kala-sarreynta ah, naqshadaha is-beddelka heerarka badan, kaas oo lagu gaaro c ...